मैले पटक पटक ब्लगमा लेख्दै आएको थिएँ, माओबादी जती गुलियो भएर आए पनि उनीहरुको चाहाना भनेको कमिनियुजम नै हो। केही बर्ष पहिले एक माओबादी मित्रबाट उनीहरुको प्लान बारम्बार बु्झ्न मौका मिलेको थियो। उनीहरु मिल्ने, अर्काको ठाँउ ओगट्ने अनि फुट्ने यो माओबादीकको निती हो। घरी गिरीजा परम शत्रु, घरी गिरीजा नेपालकै नायक, घरी भारत मुख्य शत्रू घरी भारत मुख्य नायक, घरी बुलेट घरी ब्यालेट यि सबै प्रचण्डपथ कै कला कौशल हुन। कमिन्युजम भनेर लागेका एमाले कार्यकर्ता तथा बिदेशी शुभचिन्तक एमाले प्रजातान्त्रीक भयो भनेर माओबादीको पूछार समातेका छन। त्यो माओबादीलाइ ठुलो फाइदा हुन गयो। युद्दकालबाट खुला रुपमा आउदा आंट नभएका माओबादी शुभचिन्तक पनि आरामसंग माओबादीमा आबद्द हुन पाए। माओबादी सानो पार्टीबाट अहिलेको पार्टीमा आउनु र पटक पटक बार्ता गर्दै फुटाउनु सबै प्रचण्डपथ अन्तर्गत हो।
अहिले खुला रुपमा आएर अरु पार्टीका कार्यकर्ता समेल्नु पनि उनीहरुकै निती हो। अहिलेको सेनापती काण्ड जती जसरी हेरे पनि बाकि रहेको सेनाको धुधुकी खत्तम पारेर सत्ता कब्जा गर्ने माओबादी दाउ हो भनेर नै आफु खत्तम हुने डरले पार्टीहरुले सेनापती काण्ड समर्थन नगरेका हुन । सबैलाइ लाग्यो होला किन नेपालमा अहिले सरकारमा बसेर पनि माओबादीले गाइजात्रे ताल गरीरहेको छ। उनीहरुको निती हो सरकारबाट गाइजात्रा गर्दै प्रजातान्त्रीक प्रक्रिया फेल गराउने, यता आफ्नो पकड झन बलियो बनाउने। सेना, अर्धसेना र कार्यकर्ताको बलले चारैतिरबाट थिचेर कमिन्युजम ल्याउने। तपाइहरु माओबादीलाइ सहयोग गरेर जती सजिलो अबतरण गराउने सोच्नुहोस, कुकुर आचीतीर दोडिए जस्तै माओबादीका आंखा कमिन्युजम तिर नै हुनेछन। ल हेर्नुहोस त तलको नागरिक पत्रीकाले निकालेको भिडियो, एक देशका प्रधान मन्त्रीले कसरी छापामार शैलीमा कुरा गरेका छन। के साच्चै उनीहरुले नया संबिधान बनाउन चुनाब गरेका रहेछन त?, के माओबादी प्रजातन्त्रसंग आबद्द रहेछन त? , नभन्नुहोस नि यो भिडियो नक्कली हो भनेर।
नागरिक सर्बोच्चता को रडाको गर्दै अन्तत्वगत्वा माओवादी नेत्रृत्वको सरकार राजिनामा दिन वाध्य भयो । प्रधानमन्त्रीको लामो सम्बोधनको तर्कमा कुनै तुक छैन उस्को एकल निती लागु गर्ने अभिष्टलाई नागरिक सर्बोच्चताको पगरी लगाइ दिने बाहेक । खेलकुदको मामलामा सम्पूर्ण तयारी सकिए पछी प्रमले स्वेच्छाचारी आचरण देखाउदै रातौ रात आफ्ना जन सेना लाई सहभागि गराउन गरेको निर्णय नागरिक सर्बोच्चता को लागि थियो ? , दोष आफ्नो सजाय शेनापतीलाई गर्ने ?, भर्ना प्रकरण पहिलो पटक किन नबोलेको ? दोस्रोपटक पनि प्रकृया समाप्त भैसके पछी रोक्नु भन्ने सरकारको आदेश कती बिबेकशील र व्याबहारिक थियो ? । ८ जर्नेल हरु को सम्बन्ध मा अदालतको आदेशमा काममा लगाउनु के नागरिक सर्बोच्चता को बिरुद्ध थियो ?। सरकारमा आँफै राष्ट्रिय शेनाको संख्या र मनोबल घटाउँदै जाने ? राजनीतिकरण गर्दै जाने के यही नागरिक सर्बोच्चता हो ? । काम चलाऊ अन्तरिम सरकार सधैंको लागि सत्ता ठेक्कामा पाएझै गर्नु नागरिक सर्बोच्चाता थियो ?, माओवादीको समर्थन गर्ने नागरिक समाजले किन बुझ पचाउँदै छ ?
पत्रकारको गला रेट्ने, नागरिकको सम्पत्ति कब्जा गरी आन्तरिक शरणार्थि बनाउने, हत्यारा लुटेरा बलात्करीको सम्रक्षण गर्ने माओवादीले नागरिक सर्बोच्चत्ताको दुहाइ दिनु नै हास्यापद छ । अरुको बाँच्न पाउने अधिकार समेत खोस्ने माओवादीले नागरिकको होइन आफ्नो सर्बसत्ता अधिनायकबाद्को सर्बोच्चत्ता खोजेको थियो त्यसकै अन्तिमा कडि थियो शेना प्रकरण ।
हुनत, माओवादीको उन्माद पछाडि नेपाली काङ्रेस र ए. मा. ले. को ठुलो हात छ । माओवादीको हतियार नियन्त्रण नगरी, कब्जा घर जग्गा फिर्ता गर्न नलगाइ, जनसेना सम्बन्धी मुद्धाको टुङो नै नलगाइ, माओवादी प्रजातान्त्रिक धारमा रुपान्तरण भएको बिस्वासिलो आधार बिना नै संबिधान सभाको निर्वाचनमा जानु र सत्तामा पुर्‍याउनु नै महाभुल थियो । उल्लेखित बिषयको छिनो फानो भै सकेको अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले सेनाप्रती शंका गर्नु पर्ने थिएन । बिगत तीन बर्षमा माओवादीले राज्य सयन्त्र लगायत बिभिन्न ठाउँ मा जमाएको प्रभुत्व र गरेको उपयोग राष्ट्र र आगामी सरकारको लागि महँगो साबित हुनेछ । माओवादीलाई सत्ता मा पुर्‍याएको त्यो भुलले आगामी दिनमा देशले ठुलो जोखीमको सामना गर्नु पर्ने मा शंका छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालको राजिनामाले शान्ती प्रकृया, संबिधान निर्माण कार्यमा गम्भिर असर पुर्‍याउने छ । अस्थिरता अराजकता ले झनै ठुलो जरो गाड्ने देखिन्छ । शेना प्रकरण माओवादी को लागि “किन रोइस मंगले आफ्नै ढंगले’’ साबित भयो। माओवादीको अक्षम्य गल्तीलाई देश भित्र कै राजनैतिक शक्तीले सजाय दिनु पर्दथ्यो । प्रचन्डजीको सम्बोधनको सार बुझ्दा बिदेशीको दबाब देखिन्छ, त्यो हो भने एक स्वाभिमानी नेपाली लाई ग्लानी हुन्छ । किन भने हिजो निरंकुशताको नाम मा राजा फ्याल्न बिदेशीकोमा पुग्यौ, आज अधिनायक को नाम मा प्रचन्डलाई र भोली कुनै पनि बहनामा कोइ पनि प्रधानमन्त्री फ्याकिन सक्तछ ।यता तर्फ भने राजनेता हरु गम्भिर हुनु अनिबार्य छ । देश भनेको चारतिर रेखान्कित भु-भाग मात्र होइन उसको आफ्नै स्वतन्त्र निती नियम सरकार हुन्छ र त्यस मा बिदेशी हस्तक्षेप स्विकार्य हुँदैन ।
यसै प्रसँगमा प्रधानमन्त्री को बिदेशी ( भारत )बिरोधि क्रोध पनि हास्यास्पद छ । १० बर्षको जनयुद्ध उस्कै शरणमा ( भुमी ) गरे, १२ बुँदे सम्झौता उस्कै पाउमा परेर गरे, आफ्नो पहिलो औपचारिक बिदेश भ्रमण तिमी कै हो भनी स्तुती गाए, आज सत्ता बाट फुस्काइ दिंदा स्वाधिनताको कुरा गर्नु गोही को आशु मात्र हो । माओवादीलाई सत्त च्युत गर्नु अनिबार्य थियो कुचोले बढार्नु पर्थ्यो हाबाले बढारी दियो उस्को आफ्नै गल्ती जनताको सर्बोच्चता प्रती उ कती इमान्दार छ ? आगामी गतिबिधी बाट जनताले बुझ्ने छन ।